Microsoft inoita kunge iri kurwisa makwikwi kuburikidza nemvumo | Linux Vakapindwa muropa
Isu tataura kare zvakawanda nezve huwandu hwemari unouya Microsoft pamubhadharo wekubhadharwa kwepententes. Semuenzaniso, yagadzira mamwe akawanda mamirioni kubva patent yezvishandiso zveApple nekuda kweFAT, pakati pevamwe, pane yayo pachikuva kana nhare yekushandisa: Windows Mobile. Isu tataurawo nezve mamwe maitiro asina hunhu mune izvi, asi ikozvino zvinoita sekunge vawana hukama hwakananga kubva kuMicrosoft nemaitiro aya nekuita makuhwa asisiri makuhwa ...
Microsoft inozivikanwa ku investa hombe mari mune mamwe makambani kuitira kuti ivo vari mukutarisira kumanikidza kukwikwidza kuburikidza nemvumo uye nekudaro kuve nechokwadi chechinzvimbo chakanaka nekurasikirwa nemaitiro aya. Iyo Techrights portal yanga ichinyatsotevera maitiro eMicrosoft uye vawana kuratidza hukama pakati peIntellectual Ventures neMicrosoft. Vakaona kuti Microsoft yaive imwe yevatengesi vavo vakuru.
Kubata kwako mune aya marudzi emakambani ayo kubhadharisa patents Yakanyanya kukwirira, saka vanogona kunge vari kushandisa aya masisitimendi kukwikwidza vavanokwikwidza pamwe nekuunganidzwa kwemvumo, seyiyi portal inoshuma. Iyo mari yemari yakadyarwa inodzoserwa muchimiro chekuparadza kune vavanokwikwidza navo muchikamu chetekinoroji, sekuratidzira uku hukama hwepedyo pakati peIntellectual Ventures neMicrosoft.
Uye izvo hazvingori zvinokanganisa chete Android, asi zvakare zvimwe zvakawanda zvakavhurwa sosi uye yemahara software mapurojekiti, uye akawanda GNU / Linux masystem. Tichaona kana "rugare" rwakaparadzaniswa pakati pemakambani makuru senge Red Hat uye Microsoft inoramba ichichengetwa kana munguva pfupi tinoona kuti ma software e gypsies zvakare vakagara sei vakatarisana mudare. Chinhu chinopesana nerubatsiro urwo rwuri kuwanikwa naMicrosoft kubva kuLinux, sezvatinoziva kuti yatove yarishandisa kumamwe mapurojekiti ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inoita kunge iri kurwisa makwikwi kuburikidza nemvumo
Imwe nguva yapfuura ndakati "urwu" rudo rweMIcromierda ne linux rwakanga rwusiri rwechokwadi, kuti chinhu chakanakisa chingaitika kuLinux kuenda kure kure sezvinobvira kubva kune kambani inonyengera.
Chandinofunga ndechekuti iyo linux hwaro yakatapirirwa neyakaipa-ine chinangwa capital kubva kuMicrosoft nekukuudza iwe zvese zvakanaka! apo isu tichishanda pamagadzirirwo ako iwe!
Kupi! iyo linux conspiranoids iripo kana ichidikanwa!
Rarama kwenguva refu Linux uye dai iro rima (riine bhuruu screen) risingambokubata